Chọtara 28 ~ MATIU, MAK, LUK, JỌN, ỌLU OZI, ROM, 1 KỌRINT, 2 KỌRINT, GALETIA, EFESỌS, FILIPAI, KỌLỌSI, 1 TESALỌNAIKA, 2 TESALỌNAIKA, 1 TIMỌTI, 2 TIMỌTI, TAITỌS, FAILIMON, HIBRU, JEMES, 1 PITA, 2 PITA, 1 JỌN, 2 JỌN, 3 JỌN, JUD, NKPUGHE
“Ana m agwasị unu okwu a ike na-asị na mmehie ọ bụla adịghị nke mmadụ mere megide Chineke nke mgbaghara na-adịghị. Ọ dịkwaghị ụdị nkwulu ọ bụla Chineke na-agaghị agbaghara.
Ịgwa ndị mmadụ otu ha ga-esi chọta nzọpụta site nꞌinwe mgbaghara nꞌihi mmehie ha.
ỌLU OZI 5:31
Chineke ebuliela ya elu mee ya ka ọ nọdụ nꞌaka nri ya, ka ọ bụrụ Onyendu na Onye nzọpụta, iwetara Izirel nchegharị, na mgbaghara mmehie.
ỌLU OZI 10:43
Ndị amụma nile Chineke zitere nꞌoge gara aga kwuru ihe banyere ya na-asị na onye ọ bụla kweere na ya nwere mgbaghara mmehie site nꞌaha ya.”
ỌLU OZI 13:38
“Ụmụnna m, biko geenụ ntị. Mgbaghara mmehie nile dịkwa nꞌime onye a a na-akpọ Jisọs.
ỌLU OZI 16:17
Ma o sogidere anyị ebe ọ bụla anyị na-aga, na-eti mkpu na-sị, “Ndị a bụ ndị ozi Chineke kachasị ihe nile elu. Ha abịala nꞌebe a ikwusara unu ihe banyere ụzọ mgbaghara mmehie.”
Ọ bụ ezie na ọnwụ malitere ịchị ụwa nꞌihi mmehie otu nwoke, ma ndị nile ga-anabatara onwe ha onyinye mgbaghara Chineke, na onyinye nke ịbụ ndị ezi omume nke ọ na-enyekwa, ga-esite nꞌihe Kraịst meere ha bụrụ ndị nwere ndụ nke ọnwụ na-agaghị eemri.
Mgbe iwu bịara, e sitere na ya mee ka mmadụ nile hụ otu mmehie si babiga ụba oke. Ma mgbe anyị na-ahụ ịba ụba nke mmehie anyị anya, mgbe ahụ ka anyị na-ahụkwa ịbabiga ụba oke nke amara Chineke na mgbaghara ya.
Nke a na-ezipụta otu ihe: na nꞌọnọdụ ochie ahụ, a na-eji ọbara mee ka ihe nile dịrị ọcha. Nke a na-ezikwa anyị na a sị rịị na a wụsịghị ọbara mgbaghara mmehie agaraghị adị.
Mgbe Jisọs kwuchara okwu a o kwukwara okwu ọzọ sị, “Ị dịghị aṅụrị ọṅụ nꞌịta ọ bụla a chụrụ nꞌihi mgbaghara mmehie.” Jisọs kwuru okwu ndị a ọ bụladị na a chụrụ aja ndị a nꞌusoro iwu!
Ya mere, mgbe Chineke gbaghaara mmehie ndị a nile, ọ dịkwaghị mkpa na a ga-achụ aja ọzọ nꞌihi mgbaghara mmehie.
Unu abịakwutela Jisọs onye e sitere nꞌaka ya mee ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ dịrị nꞌetiti Chineke na mmadụ. Unu abịakwala nꞌọbara e fesara, nke na-ekwu okwu mgbaghara mmehie. Ọbara a dị mma karịa ọbara Ebel, nꞌihi na ọbara Ebel lere anya ịbọ ọbọ.